Madaxweynaha oo sheegay inuu jiro qorshe dowladeed oo lagu dhowrayo degaanka – Radio Muqdisho
11 April 2015, Muqdisho: Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta daah furey toddobaadka dhir beerista qaranka oo lagu qabtey magaalada Muqdisho.
Munaasabaddan oo loogu diyaar-garoobayo maalinta dhirta oo ku beegan 17-ka April, ayaa Madaxweynaha waxaa uu taallada Daljirka Daahsoon ku beeray geed dhireed, isagoo isla markaana halkaasi khudbad kooban u jeediyey ururrada bulshada, ardeyda iyo dadweyne fara badan oo halkaa isugu yimid.
‘’Dhirtu waxay muhiim u tahay nolosha aadamiga, xoolaha iyo in degaanka la dhowro. Waxaa dowladdu ay waddaa barnaamij ballaaran oo degaanka wax looga qabanayo, kaas oo aan ka duwaneyn barnaamijyada dib u dhiska dalka’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku boorriyey shacabka in munaasabaddan awgeed ay geedo badan beeraan, iyagoo ka fikiraya mustaqbalka jiilka soo socda ee Soomaaliyeed.
Munaabaddaasi waxaa kale oo ka soo qeybgaley xubno ka tirsan labada gole.